Cryptomator: chengetedza uye encrypt yako mafaera kubva kune yako gore masevhisi | Linux Vakapindwa muropa
Iko kushandiswa kwemasevhisi egore nhasi kwatova kwakajairika, saka tinochengeta ruzivo rwedu uye mafaera mune mumwe wevanopa akasiyana Izvo hazvichamiriri chero dambudziko kune zvese kuzviisa uye kuwana kuwanikwa kweizvi pane edu mazhinji zvigadzirwa.
Iye zvino kuchengetedzwa kwekubata ruzivo urwu kunoenderana zvakanyanya nemushandisi wekupedzisira, sezvo mazhinji makore masevhisi achiwanzoshandisa imwe nhanho yekuchengeteka, maprotocol uye zvitupa zvekuchengetedza uye kuchengetedza mafaira edu.
Ndokusaka nhasi tiri kuzotaura nezve kunyorera kuchatibatsira nekuchengeteka kwemafaira edu. Iko kunyorera kwaticha taura nezvako nhasi ndiCryptomator.
1 Nezve Cryptomator
2 Maitiro ekuisa Cryptomator paLinux?
Cryptomator ndeye yakavhurwa sosi, yemahara uye yepamberi-chikuva software chishandiso chine rezinesi pasi peGPLv3que inopa mutengi-padivi kunyorera kwemafaira ako ekuchengetedza gore, iyi application inowanikwa yeWindows, Mac, Linux, iOS uye Android.
Chishandiso, icho chiri nyore kushandisa, inotsigira chero gore rekuchengetera mupi rinowirirana nedhairekitori renzvimbo.
Iwe hautombofaniri kudoma gore raunoshandisa. Cryptomator inonyora mafaira uye haina basa nekwaunochengeta. Izvi zvinoita chisingaremi kushanda.
Nekuti Cryptomator inoshandisa mutengi-padivi kunyorera, zvinoreva kuti data rako rakavharirwa kutanga uyezve rinowiraniswa nepamhepo gore rekuchengetedza sevhisi, kuitira kuti pasave ne data risina kunyorwa rinosara pakombuta yako.
Cryptomator encrypt zvemukati uye faira mazita uchishandisa iyo AES algorithm, iro password rinodzivirirwa pakurwisa kwesimba kuedza uchishandisa scrypt.
Dhairekitori zvimiro zvakavezwa. Chinhu chega chisingakwanise kuvharidzirwa pasina kutyora gore sync izuva rakashandurwa remafaira ako.
Kunyange iwe unogona kugadzira akawanda vaults kune rimwe chete gore rekuchengetedza mupi, saka unogona kuva nevhavha yekushandisa kwako pachako.
Zvichienzaniswa nedzimwe diski encryption zvinoshandiswa, Cryptomator inonyora yega yega faira zvakasiyana. Naizvozvo, kana iwe ukarongedza chete diki mameseji faira, chete inoenderana yakavharidzirwa faira ichagadziriswa.
Neiyi nzira, yako Cloud chengetedzo mupiki's sync mutengi anoziva chaizvo izvo zvinofanirwa uye hazvifanirwe kuiswa.
Maitiro ekuisa Cryptomator paLinux?
Si vanoda kuisa iyi application pane avo masisitimu, zvinodikanwa kuti vavhure terminal uye vaite mimwe mirairo maererano neLinux kugovera kwavari kushandisa.
Si vashandisi veUbuntu kusvika kunguva 17.10 vanogona kushandisa iyi repository Kuisa iyo application, iwe unofanirwa kunyora kuti:
Uye vanoiisa ne:
Kunyange, yevashandisi veDebian, Ubuntu 18.04 kana zvigadzirwa zveizvi tinokwanisa kurodha pasi package yekushandisa uye kuiisa nayo.
Kana vari uchishandisa 64-bit system iyo package kurodha pasi iri:
Asi kana yako system iri makumi matatu nematatu iyo package yezvivakwa zvako ndeiyi:
Kuna LFedora, CentOS, openSUSE, vashandisi veRHEL kana chero sisitimu ine rutsigiro rweRPM mapakeji ivo vanofanirwa kudhawunirodha mamwe emapakeji zvinoenderana nemavakirwo avo.
Para 64 matomu:
Para 32-bit masisitimu:
Zvino kana iwe uchida kuisa Cryptomator paArch Linux, Manjaro kana kumwe kugovera kunoenderana neizvi, Izvo zvinodikanwa kuti ivo vave neAUR inogoneswa pane avo masystem ayo ivo avakaita nekuiwedzera kune yavo pacman.conf faira
Mushure meizvozvo, kuti uite iko kumisikidza, iwe unofanirwa kunyora kuti:
Uye vakagadzirira nazvo, ivo vanenge vatove nechishandiso chakaiswa pane avo masisitimu. Kana iwe uchida kuisa iyo application pane yako Smartphone kana Hwendefa, unogona kupinda kune inotevera chinongedzo uko kwavanogona kuwana kunyorera kwemidziyo yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Cryptomator: chengetedza uye encrypt yako mafaera kubva kune yako gore masevhisi
Manuel Garrido akadaro
Inotaridzika kunge inonakidza kumakopi ekuchengetedza. Asi kana paine chimwe chinhu chakanaka nezvegore, iwo mukana wekuwana mafaera ako kubva chero kupi uye chero nguva, chero bedzi uine Internet yekubatanidza. NaCryptomator zvinosuruvarisa, iwe unorasikirwa nehwohwo hunowanzo.
Pindura Manuel Garrido
Peppermint 9, iko kugovera kunobva paUbuntu 18.04, kunosvika zviri pamutemo